OTU ESI EJI RAIDCALL - ESI MEE - 2019
Otu esi eji RaidCall
RaidCall bụ usoro n'efu maka nkwurịta okwu olu na obere oge igbu oge maka ndị ọrụ egwuregwu. Kwesịrị ekwesị maka nkwurịta okwu nke egwuregwu na egwuregwu, karịsịa na ndị chọrọ ọrụ otu, dịka ndị na-agba egwu ma ọ bụ MMORPG. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji hazie ma jiri usoro ihe omume ahụ.
Dị ka ọ dị, RaidCall na-ebuli ọtụtụ ajụjụ maka ndị na-eme ihe omume ahụ maka oge mbụ. Anyị ga-atụle ajụjụ ndị kasị ewu ewu na-esite n'aka ndị ọrụ.
Download ụdị RaidCall ọhụrụ
Okwu mmalite nke usoro ihe omume
RaidCall nwere interface dị mgbagwoju anya, ya mere ndị ọrụ anaghị aghọta ozugbo, ebe na otu.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị ike ịdebanye aha na RaidCall, gbalịa ịchọta nsogbu gị n'isiokwu a:
Otu esi emepụta akaụntụ na RaidCall
Na-agba ọsọ gburugburu ebe obibi. Ihe ị ga-eme
Otu n'ime njehie kachasị njọ bụ njehie na-agba ọsọ. Ọ na-eme n'ihi na ị nwere mbipute oge ochie nke usoro ihe omume ahụ. Iji dozie njehie ị chọrọ ibudata ụdị RaidCall ọhụrụ ma wụnye ya na PC gị. Gụkwuo na isiokwu:
Idozi njehie gburugburu ebe obibi na RaidCall
Esi ewepu mgbasa ozi?
Enwere ike mgbasa ozi mgbasa ozi na RaidCall? I nwere ike ikpochapụ ya. Naanị ị ga-ehichapụ faịlụ ole na ole site na nchekwa ihe omume ahụ. Iji mụta otu esi ewepu mgbasa ozi, lee isiokwu dị n'okpuru:
Otu esi ewepu mgbasa ozi RaidCall
Gini mere ọ bụghị ọrụ RaidCall?
Ọ na - eme na RydeCall anaghị amalite. Enwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara ya, mana ka enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke ụwa iji mee ka usoro ahụ laghachi azụ na-arụ ọrụ. Lezienụ anya n'isiokwu dị n'okpuru, ebe a kọwara usoro ndị a:
RaidCall anaghị amalite. Ihe ị ga-eme
Anyị na-atụ anya ka isiokwu ndị a kpọtụrụ aha n'elu ga-enyere gị aka ịghọta usoro ihe omume RaidCall ma mee ka ọ dị mma.